चेल्सीमा अर्को स्ट्राइकर ल्याउन मोराटकै सुझाव ! | Hamro Khelkud
चेल्सीमा अर्को स्ट्राइकर ल्याउन मोराटकै सुझाव !
लन्डन (एजेन्सी)– अल्भारो मोराटोको दबाबकै कारण क्लबले नयाँ स्ट्राइकर क्लबमा भित्र्याउनु परेको चेल्सीका प्रशिक्षका माउरिजियो सारीले बताएका छन् । मोराटाले स्पेनिस क्लब जान चाहेकोले क्लबले अर्को स्ट्राइकर ल्याउन सुझाएको सारीले प्रष्ट पारेका छन् ।
चेल्सीले गोन्जालो हिगुइनलाई ६ महिनाको लोनमा भित्राएको छ । मोराटा पनि ६ महिनाकै लागि एट्लेटिको म्याड्रिडमा लोनमा गएका छन् । दुवैसँग त्यसपछि स्थायी रुपमा क्लबमा स्थायीय रुपमा आबद्ध हुने विकल्प पनि छ ।
‘मलाई लाग्छ मोराटा निकै राम्रा खेलाडी हुन् । मेरो टोलीमा खेल्ने क्षमता उनीसँग छ । तर एक महिना अघि मोराटाले आफुले अन्तैबाट खेल्न चाहेको बताए,’ सारीले भने,‘ जसका कारण मैले उनको मनस्थिति बुझ्दा उनीबाट सतप्रतिशत प्रदर्शन लिने सम्भावना कठिन थियो ।’
मोराटामा अझै महत्वपूर्ण खेलाडी बन्ने क्षमता रहेको सारीको भनाई छ । ‘शारीरिक र टेक्निकल रुपमा उनी निकै राम्रो खेलाडी हुन् र फुटबलका लागि ठिक छन्,’ उनले थपे,‘ तर पछिल्लो महिना परिस्थिति परिवर्तन भयो । त्यसैले हामीले पनि परिवर्तन हुन पर्यो । ’
सन् २०१७ मा रियल म्याड्रिडबाट चेल्सी पुगेयता मोराटाले उच्च प्रदर्शनका लागि संघर्ष गरिहेका थिए । उनले चेल्सीबाट ७२ खेलमा २४ गोल गरे । अर्कोतर्फ हिगुइनको पनि यो सिजन राम्रो हुन सकेको छैन ।
यद्दपी सारीको नेतृत्वमा हिगुइनले राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपोलीमा सारीको नेतृत्वमा हिगुइनले उच्च प्रदर्शन गरेका थिए ।